ကိုယ့်ရဲ့ Page တွေ Account တွေ Hack လုပ်မခံရစေဖို့ - ၂ | Online Service Center Myanmar -->
ကိုယ့်ရဲ့ Page တွေ Account တွေ Hack လုပ်မခံရစေဖို့ - ၂
ကဲ... မရိုးနိုင်တဲ့ အကောင့်ခိုးနည်း၊ Page ခိုးနည်းတွေ ထပ်လာပြန်ပြီနော်။ အူတူတူအတတနဲ့ Security Knowledge သာရှိမထားဘူးဆိုရင် ဒီနည်းနဲ့ #ကိုယ့်အကောင့် #ကိုယ့်Page #ကိုယ့်ဘဏ်ကတ်ထဲကငွေတွေ အကုန်ပါသွားဖို့ရှိတယ်။
သူနည်းလမ်းက အူတူတူအတတနဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေဆိုရင် #ဂျင်း ထည့်ခံရမှာသေခြာတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အခုရက်ပိုင်းထဲမှာ Page တွေ၊ အကောင့်တွေကလည်း ခနတိုင်းအပိတ်ခံနေရတာဆိုတော့ သူပြောထားတာဟုတ်များဟုတ်နေမလားဆိုပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ပဲ သူပေးထားတဲ့ Link ထဲကိုဝင်မိတာနဲ့ အကုန်ပါသွားပြီပဲ။
သူပြောထားတာက " Hello Page ပိုင်ရှင်ရေ မင်းရဲ့အကောင့်ကိုငါတို့ ပိတ်ရပါလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မင်းက Policy or Community Standards မျိုးတွေကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက် တစုံတယောက်က Report လုပ်ထားလို့ပါ၊ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့အကောင့်အပိတ်မခံရစေဖို့ ဒီနေရာမှာဝင်ရောက်ပြီးအတည်ပြုပေးပါ" ဆိုပြီး Link တခုပေးပြီး #ဂျင်းထည့် ထားတာကြောင့်ပါပဲ။ Page ကိုစထောင်ထားတဲ့ Owner Account နဲ့ ဝင်ခိုင်းထားတာဆို‌တော့ ခိုးပြီး ပြန်ပါမသွားအောင်အထိပါ ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်။
သူပေးထားတဲ့ Link ကို Test လုပ်ကြည့်တော့ Phishing ( Account, Page, နဲ့ Bank Card ထဲက ငွေတွေကိုခိုးဖို့ လုပ်ထားတဲ့ Facebook login Page အတု ) ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီ Link ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook အကောင့်ကို Login ဝင်ခိုင်းထားတာတွေ့ရတယ်၊ အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာ Page owner access ကိုတိုက်ရိုက်ရယူဖို့လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်၊ နောက်ပြီး ဘဏ်ကတ်အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ခိုင်းထားပြီး ဘဏ်ကတ်ထဲကအချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ခိုင်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပြန်တယ်၊ အူတူတူအတတနဲ့သာဆိုရင်တော့ အကုန်ကုန်ပြီပေါ့။
ဒါကြောင့် မအူကြပါနဲ့၊ မအကြပါနဲ့ အဲ့လိုဂျင်းလိုက်ထည့်နေတာတွေမှာ အယုံလွယ်ပြီး အကောင့်တွေ Page တွေ၊ ပါမသွားစေဖို့ သတိထားကြပါ။
#ဂျင်းလိုက်ထည့်နေတဲ့ Page အတု -
App Seçuriƭy Supporƭ
#ဂျင်းလိုက်ထည့်နေတဲ့ Post -
#ဂျင်းထည့်ထားသည့် Link ( လုံးဝမှဝင်မကြည့်ပါနဲ့ ) -
#ဂျင်းထည့်ထားသည့်လင့်နောက်ကွယ်မှ Phishing link -
Dear administrator page!
Your account will be disabled.
This is because someone has reported you withanon-compliance with the Terms of Service. If you are the original owner of this account, please re-verify your account to avoid blocking.
Please confirm your account here : https://rb. gy/53cmzp
If you do not confirm, our system will automatically block your account and you will no longer be able to use it.
© Facebook, Inc. 7811 Menlo Park, California, California, 94043,
U.S. 2020 Copyright
Pan Yaung Online Store
Little Lady Boutique Fashion Corner
ဆန်းယဥ်နာရီစတိုးSan Ying Timepiece 珊盈钟表行
Miss Fortune Fashion House
သဘာ၀ ရတနာ Beauty slaon
Young’s Fashion အဝတ်အထည်အမျိုးမျိုး
Moon Vintage Collections
Pan Yaung Vintage Onlineshop
Fashion By Tracy Online Shop
Cho Cho Fashion Shop
Bay Bay online shop
Bangkok Fashion By HerLand
Lucky Six - UK & U.S.A Branded Store
Bangkok Fashion Store
Fair Export - MDY
Nangsu Fashion shop
Age&Vision Online Shop
NLK Fashion Suit
YOON 97 Lady Fashion Shop
Sein Tharaphu Gems and Jewelry
Candy Watch Online Shopping
Queen Collection Fashion Square
My Fashion USA
Panasonic Beauty Myanmar
Hsu Oo Fashion Collection
Vida Hair & Beauty Bar
အပေါ်က ဂျင်းထည့်ခံထားရတဲ့ Page ပိုင်ရှင်တွေထဲမှာ အူတူတူအတတနဲ့လူတွေပါရင်တော့ အကောင့်ရော၊ Page ရော၊ ဘဏ်ကတ်ထဲက အချက်အလက်တွေပါ အခိုးခံရဖို့ 100% ပါပဲ။
ကဲ... အားလုံးပဲ သတိရှိကြပါ၊ ဒီနည်းနဲ့ အခိုးမခံကြရစေဖို့သတိထားကြပါလို့ပဲ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 27.11.2020 - 12:26 AM )
ဒီနေရာမှာ ဘုမသိဘမသိနဲ့ Facebook Account ကို Login ဝင်လိုက်ရင် အကုန်ပါသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘဏ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ပေးလိုက်ရင် ဘဏ်ကတ်ထဲမှာရှိသမျှပိုက်ဆံတွေလည်း ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။